အရှင် မေတ္တာစာရ၏ထေရုပ္ပတ္တိ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
အောင်အောင်(မကစ) မှ August 6, 2012 10:12pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁၉၈၀ခု ၊ မေ ၁ ရက်
ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်၊ အယ်ဒီတာ၊ ဘလောက်ဂါ
အရှင် မေတ္တာစာရ သည် မြန်မာနှင့် နိုင်ငံတကာဘလော့ဂ်လောက၌ ရဟန်းတော်တစ်ပါးအဖြစ်ဖြင့်ထင်ရှားသည် ။ အရှင် မေတ္တာစာရ ကို မေလ ၁ ၊ ၁၉၈၀ခုနှစ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀န်သိုမြို့၌ ဦးမြသီး+ဒေါ်ညိုဥတို့မှ မွေးဖွာ:သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ကိုရင်စ၀တ်ပြီး ၂၀၀၀ခုနှစ်အရောက်တွင် မြင့်မြတ်သော ရဟန်းဘ၀သို့ ကူးပြောင်းခံယူသည်။ မြန်မာအစိုးကကျင်းပသော ပထမပြန်စာမေးပွဲများ ( မူ၊ငယ်၊လတ်၊ကြီး) အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ပညာတော်သင်ကြွရောက်ခဲ့ပြီး ဘီအေ၊အမ်အေ (B.A,M.A) နှစ်ဘွဲ့စလုံးကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအစိုးတက္ကသိုလ်  Buddhist and Pali University of Sri Lankaမှရရှိထားသူဖြစ်သည်။ ဘီအေ ဒုတိယနှစ်တွင် မြန်မာရဟန်းတော်တစ်ပါးအနေဖြင့် ပထမဦးဆုံး ပါဠိဘာသာဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ဘီအေဘွဲ့နှင့် ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် အမ်အေဘွဲ့ကိုပြီးသည်။ ၂၀၀၉နှစ်တွင် အိန္ဒိယမှနာမည်ကြီးဘလော်ဂါလည်းဖြစ် Bastiat prize ဆုရထားသူလည်းဖြစ်သော Amit Varma ကို ကျော်ဖြတ်ကာ အာရှအကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်ဆုကို ပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံသား၊ရဟန်းတော် တစ်ပါးအနေဖြင့် ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ အရှင် မေတ္တာစာရ ရရှိခဲ့သောမဲအရေအတွက်မှာ ၃၃၈၃ဖြစ်ပြီး ၄၁.၂ ရာခိုင်နှုံးဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယဘလော်ဂါ Amit Varma မဲအရေအတွက်မှာ ၃၀၉၁ဖြစ်ပြီး ၃၇.၇ရာခိုင်နှုံး ဖြစ်သည်။
ခန္တီးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်(၀န်းသိုမြို့)၊ ၀ါယာလက်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ မာန်အောင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်(ရန်ကုန်) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဘာသာစကား
ဘာသာစကား= အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ဆင်ဟာလ
ပရိုဂရမ်မင်း= C/C++, Java, Python, PHP, Ruby, Lua
Dailay Otago News
Who Killed Mored?
The war criminal was elevated by the United Nations
Best Asian Blog Award
A Blog of the Day Award
hla moe 24 သည် August 8, 2012 က 1:37amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် RSS
Top News · Everything dimplemit liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်'12 minutes agodimplemit commented on thein wai's blog post 'လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ ?။'"ကျေးဇူးအထူးပါ။"15 minutes agodimplemit liked thein wai's blog post 'လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ ?။'16 minutes agothein wai postedablog postလက်ဆောင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ ?။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်တို့ကြားမှာ မိဘက သားသမီး ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သားသမီးက မိဘကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တပည့်က…See More1 hour ago 1
padout liked dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'2 hours agothein wai shared their blog post on Facebookသာသနာကွယ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍3 hours agothein wai shared their blog post on Facebookလူတိုင်းလူတိုင်း ခံစားနေရတဲ့ “ ဒုက္ခ (၇) မျိုး ” ။3 hours agoဦးအောင်ကိုး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"3 hours agoဦးအောင်ကိုး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ'"လူ့ လောကထဲမှာ တော့ ဘာကာမဂုဏ်ချမ်းသာမှ ချမ်းသာအစစ်မဟုတ်တကယ်ချမ်းသာမရှိလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါသည်."3 hours agoမူကြိုဆရာ posted blog posts“… ရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်သလဲ …”အနာထပိဏ် နဲ့ ၀ိသာခါ…ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်3 more…4 hours agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ6 hours agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ'6 hours ago More... RSS